Steam Play inowana diki diki neProton 4.11-5 | Linux Vakapindwa muropa
Steam Play inowana diki diki neProton 4.11-5
El Steam Play mutengi inowana diki diki. Software yaValve yeiyo Steam vhidhiyo yemitambo chikuva inoenderera mberi. Ivo vanogadzira kuseri kwekuvandudza uku vanga vari Valve mukubatana neCodeWeavers, ndiko kuti, kana iwe uchirangarira kuti ikambani iri kuseri kweCrossOver, iyo yakabhadharwa kuitiswa kweWine. Uye rangarira zvakare kuti Proton inoitwa paWine kuitira kuti vashandisi veLinux paStam vatambe mitambo yemavhidhiyo yeWindows.
Kana iwe uine vhezheni yechinyakare yeSteam unogona kugadzirisa yako vhezheni kune iyi nyowani kuburitswa na kumwe kugadzirisa iyo yandichataura pazasi. Kana iwe usina, uye iwe uchida nyika yekutamba, haufanire kumirira kuve nayo. Chokwadi ndechekuti muchitoro cheValve iwe unowana akawanda anonakidza mazita, ese ari maviri kuGNU / Linux pamwe neakaberekerwa kuMicrosoft Windows yaunogona kuwana nekutenda kuProton ...
Kana zvakadaro shanduko dzaunogona kuwana mune itsva Steam Play vhezheni, hezvino zvakakosha:
Yakagadziriswa dzimwe nyaya dzakakonzera zviitiko kana uchimhanyisa Steam Play nemamwe madhivhisi pawanga uchishandisa Proton 4.11-4. Zvino na Proton itsva 4.11-5 hazvingazovipozve.
Kugadziriswa kwemamwe matambudziko emitambo yemavhidhiyo anga achimhanya mune desktop desktop uye semi-yakajeka windows. Iwo matambudziko maviri idambudziko rakaunzwa muProton 4.11-4, asi iwe uchafanirwa kutonetsekana nezvedambudziko iri mushanduro nyowani.
Performance optimizations paunenge uchishandisa mutyairi neiyo Radeon AMDGPU kadhi mutyairi.
Kugadziridzwa kwefsync kuitiswa apo WINEFSYNC_SPINCOUNT iri kushanda.
Y kumwe kuvandudzwa zvimwe zvakaunzwa mushanduro dzakapfuura uye, sezviri pachena, inogara nhaka iyi vhezheni zvakare. Unogona kuzviona mu changelog zvizere…
Nakidzwa kunge inveterate gamer!
Para download uye dzishandise iyo Steam package - Yepamutemo Steam Webhusaiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Steam Play inowana diki diki neProton 4.11-5
Iyo Linux Foundation yekugamuchira yakavhurwa sosi purojekiti yedrone yekufambisa ndege kusabatana
EndeavorOS inotangisa yayo yaSeptember vhezheni, ine Linux 5.2 uye Firefox 69